စာကျက်ပေမယ့် ရသလို မရသလိုဖြစ်ပြီး မေ့မေ့သွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ကြုံဖူးတယ်မို့လား....။ စာဆိုတာ ကျက်ရုံနဲ့ မပြီးပါဘူးနော်၊ မှတ်မိဖို့အတွက် ဘာတွေ လုပ်မလဲဆို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်...။
၁. ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အချိန် စာကြည့်တာ အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာသိရမယ်။
ညီငယ် ညီမငယ် တို့မှတ်ထားရမှာက တယောက်နဲ့တယောက် စာဖတ်နည်း ကတူမှာ မဟုတ်ဘူး။ စာဖတ် တဲ့ကြာချိန်တွေကလည်း တူနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တချို့တွေက မနက် ၊ နေ့လည် ဒါမှဟုတ် ညဘက် တွေစာကြည့်ရင် ပိုပြီးစာရကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်အချိန်မှာ စာဖတ် ရတာ အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင်စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်။
၂. အသံထွက်ပြီးဖတ်တာ ဒါမဟုတ် စကားပြောရင်း ဖတ်သွားပါ။
စာဖတ် တယ်ဆိုတာ မြင်ဖူးရုံလောက်ပဲဖတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့လိုမျိုးပဲ ဖတ်မယ်ဆိုရင် သေချာတာကတော့ မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ အချိန်လည်းကုန်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် နည်းလမ်းပြောင်းပြီး စာဖတ်ပေးသင့်တယ်။ အသံထွက် ပြီး ဖတ်တာ ဒါမှမဟုတ် စကားပြော တဲ့ပုံစံနဲ့ စာဖတ် သွားတာပေါ့။ သမိုင်း ကို ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖတ်ရ င်းနဲ့ တခါတည်း ကိုယ့်စကားနဲ့ကို ပြန်ပြောပြီး နားလည်အောင်လုပ်သွားရင် ပိုပြီး မှတ်မိသွားတယ်။
၃. ဖတ်ပြီး ရင် အကျဉ်းချ ရေးထားလိုက်ပါ။
ဖတ်ပြီးသာစာကို ပြန်ဖတ် တဲ့အပြင် အကျဉ်း ထုတ်ထားတာက ကိုယ့်ကို ပိုမှတ်မိစေတယ်။ ချရေးပြီး အကျဉ်း လုပ်တာ ဒါမှမဟုတ် ပုံဆွဲပြီး အကျဉ်း ထုတ်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့ဒါက တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် ရှင်းလင်းချက် ကို ရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် စာမေးပွဲ မှာ အထောက်အကူပြုတယ်။
၄. ဖတ်တာ တခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ အမေး အဖြေ တွေကိုလဲ လေ့ကျင့် ဖို့လိုတယ်။
ဖတ်လည်းဖတ်ထားပြီ။ အကျဉ်း လည်း ထုတ်ထားပြီဆိုရင် မမေ့သင့်တာက အမေး အဖြေတွေကိုလည်း လေ့ကျင့် ဖို့ပဲ။ မေးခွန်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးစေတာပဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ အဲ့ပုစ္ဆာကိုဖြေရှင်းမဲ့ နည်းလမ်း အသစ် တွေကိုလည်း လေ့လာမိတယ်။
၅. ဆိုရှဲလ် မီဒီယာ တွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကို ပြန်စမ်းစစ်ပါ။
စာဖတ် ရတာ အာရုံမရတာနဲ့ စာဖတ် ဖို့ အချိန်မရှိတာရဲ့ ပြဿနာတမျိုးက ဆိုရှဲလ် မီဒီယာ အလွန်အကျွံသုံးစွဲတာ။ စာကို ၂ နာရီ လောက်အာရုံစိုက်သင်လိုက်ပြီး ကျူရှင် ဆင်း အိမ်ပြန်တယ်။ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ဖုန်းပြောတယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းဆော့ရင်း စာလုပ်ဖို့မေ့သွားကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ် ရင်လည်း အာရုံမရကြတော့ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် စာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ။
၆. မနက်မိုးလင်းထိ စာမကြည့်ပါနဲ့။
မနက်ထိ စာကြည့်ရင် ပိုပြီး မှတ်မိစေတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေအတွက် အဲ့ဒါက မှားတဲ့အတွေးပါ။ အိပ်ငိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းမကြည်ပဲနဲ့ စာမေးပွဲဖြေရင် ဘယ်လိုလို့ စာတွေမှတ်မိမှာလဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် အိပ်ရေး ဝဝအိပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
Read 3753 times Last modified on Thursday, 08 November 2018 14:01
စာဖတ်ခြင်းကြောင့် သာမန်အလုပ်သမားဘဝမှ မီလီယံနာဘဝကို ပြောင်းသွားသူ